Ka digtoonow internetka Caan Aah | Martech Zone
Jimcaha, Sebtember 25, 2009 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Dhowr toddobaad ka hor, waxaan ka helay emayl haweeney wax iga weydiineysa waxa ku saabsan Buug ku qor Blogging iyo SEO. Waxay ahayd xoogaa emayl murugo leh - aqrinta haweeney rabay si aan u iibsado e-Book-kayga wuxuu ku qarash gareeyay tan tan lacag ah goobta looga hadlay oo wax natiijo ah kama helin waqtiyadii lasoo dhaafay. Waxaase la yaab leh, maqaalka ay akhriyeen wuxuu ahaa mid aan ku bixiyay tan lacag ah si aan halkaas ugu dhigo.
The Internet Caan ah goobta dadka waxay lahaayeen tirooyin aad u cajaa'ib badan iyo xitaa liis aad u xiiso badan oo xayeysiiyayaal ah. Waxay si fiican u sheegteen in ka badan 50,000 akhristayaasha maalin kasta inta udhaxeysa ilaha baahintooda oo dhan. Taasi waa dhagaystayaal fiican in la gaaro! Dhagaystayaashuna waxay kab u ahaayeen alaabtayda. Waxaas oo dhami waxay ku yaalliin: kubbadaha indhaha iyo dhagaystayaasha la bartilmaameedsaday. Mise waxay ahayd?
Bil ka dib markii shaqadu socoto oo xitaa ma haysto 200 soo booqdayaasha goobta. Taasi waa martida… ma ahan beddelaad… si fudud martida. Labada boqol ee soo booqdayaasha ah, hal qof oo runtii iibsaday buugga elektarooniga ah. Waxaan is arkay aniga oo ku sugan xaalad la mid ah tii haweeneyda i qortay. Waxay ka cawday inay qarash garaysay lacag aad u tiro badan isla markaana aysan waligeed natiijo ka helin talo kasta oo ay iyada bixiso bixisay loogu talagalay websaydhka su'aasha laga qabo. Websaydhku wuxuu ka yimid qof Internet Caan ah.
Sawir laga soo qaaday Amit Gupta
Aragtidayda internetka Caan ka ah
Marka, iyada oo maskaxda lagu hayo, iyo ururinta Internet Caan ah dadka aan aqaano ama aan lashaqeeyay, waa kan aragtidayda:
Internet caan ah dadku hal shey ayey ku fiican yihiin Internet caan ah.
Qaar badan oo ka mid ahi dhab ahaan lama shaqeeyaan macaamiisha (kuwa ka baxsan kuwa doonaya inay qof shaqaaleeyaan Internet caan ah hana ka sugin natiijooyin). Intooda badani waxay ku mashquulsan yihiin isku dayga inay sii wadaan muuqaalka ay si ballaadhan ula socdaan ugana caqli badan yihiin intayada kale. Intooda badani waa dhakhso, caqli badan, caqli badan, iyo sayid si cad u muuqda. Qaar badan oo ka mid ahi waxay leeyihiin heshiisyo buug. Qaarkood waxay ku mashquulsan yihiin buun buuninta tirooyinka si ay muuqaalka ula socdaan.
Waxay garteen in ka-gudubka shaqada adag iyo natiijooyinka si fudud loo noqdo Internet Caan ah waxay ahayd hab fudud oo lacag lagu helo. Sababta Sababtoo ah waxaan dooneynaa qaar ka mid ah casiirkooda… waxaan rabnaa inaan raacno gaari… waxaan rabnaa wadada fudud, sidoo kale.
Ma fududa, in kastoo. Ha filanin inaad natiijo hesho markaad lacag ku tuureyso Internet Caan ahKaliya xusuusnow inaad ka caawinayso inay caan ku noqdaan. (Taasina waa caadi, sidoo kale!)
Ku saabsan Blog-kan
Taasi waa sababta aan ugu faraxsanahay boggan iyo qorayaasha ku jira guddiga (inbadan oo soo socota). Dhamaanteen waxaan nahay suuqleyda shaqeeya maalin kasta si aan u hagaajino guusha macaamiisheena. Balooggu waa hamigeena, ee maahan faa'iidadayada. Waxaa laga yaabaa in maalin uun aan kala tagno oo aan noqonno Internet Caan ah. Hadday taasi aniga tahay, hubi inaad wax iga qorto oo aad ila xisaabiso, in kastoo!
Haweeneyda, waxaan u diray koobi ah Blogging Corporate for Dummies oo bilaash ah oo ka codsaday inay bixiso oo keliya haddii ay ka faa'iideysato buugga. Taasi waxay u socotaa midkiin! Haddii aad shakisan tahay, waan ku faraxsanahay inaan kuu soo diro nuqul!
Tags: hubkaabaloog loogu talagalay seoblogging shirkadahainternet caan ah
Suuq-geynta Soo-Galaha iyo Mashruuca Iibka Cusub
Sep 26, 2009 at 3: 36 AM
Waxaan u maleynayaa in odhaahdu tidhaahdo "wax kasta oo dhalaalayaa dahab maahan." Waa wax laga xishoodo inay jiraan dad halkaas jooga oo aan doonayn inay hubiyaan in wax soo saarkooda / adeegoodu uu ku qanco.
Sep 28, 2009 at 8: 27 AM
Haa, fadlan ii soo dir nuqul ka mid ah 25 Talaabooyin Guusha e-Buugga oo bilaash ah, waxaanan ku qaadan doonaa isla shuruudaha.